pajira riya jira Factory | China mesh jira Vagadziri, Vatengesi
High yepamusoro DTY polyester nedhaimani pajira riya jira zvemitambo uye lining
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi dhayamondi mesh jira, yedu chinyorwa nhamba HS2038, yakarukwa ne100% polyester. Iyi fema inofema uye yakapfava. Panguva imwecheteyo, nekuda kwehunyanzvi hwehunhu hweDTY, ine yakatambanuka zvishoma. DTY inodaidzwa kuti polyester yakadhirowewa shinda yakavezwa, inova inorapwa kupisa nekumonyoroka. DTY polyester yarn ichagadzira inobata uye yakasununguka kubata kune iyo warp yakarukwa mesh machira. Iyi chara ...
Nemhepo warp kuruka 100% polyester 75D pajira riya jira zvemitambo
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi poly mesh machira, yedu yechinyorwa nhamba HS087, yakarukwa ne100% polyester. Iyo ine yakavhurika yakarukwa ine yakajairwa pateni yemaburi kuitira kuti vatambi vatonhorere panhandare. Iyi polyester mesh machira inofema zvakanyanya, panguva imwechete, ndeye yakasimba yakasimba yakarukwa mambure machira. Iyi warp yakarukwa mesh machira yakanaka kune yunifomu yemitambo, juzi yemitambo uye lining nezvimwe, sezvo iri nyore, ine mhepo, uye inobata chimiro chayo
Custom 100% polyester mitambo shiri ziso pajira riya jira zvemitambo nguo
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi shiri yeziso mesh jira, yedu chinyorwa nhamba HS008, yakarukwa ne100% polyester. Jira reBirdeye rudzi rwejira rinoshanda, rinozivikanwawo sejira rinobata ziya, rinoratidza kuti shiri yeziso mesh jira jira rinofema kwazvo. shiri ziso pajira riya jira rinoshandiswa zvakanyanya kugadzira mbatya dzemitambo, izvo zvinonyanya kukonzerwa nekufema uye ziya rekutora. Tinogona kuita rakasiyana basa rejira ac ...
100% Polyester chena micro mesh jira remitambo kupfeka
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi polyester micro mesh machira, yedu chinyorwa nhamba HS068, yakarukwa ne75 denier polyester filament yarn. Izvo zvakanaka kune ese ari maviri kumusoro uye pasi pemitambo yemitambo uye mbatya dzinoshanda mumitambo inosanganisira lacrosse, nhabvu, nhabvu, uye basketball. Iyo ine yakavhurika yakarukwa ine yakajairwa pateni yemaburi madiki ekuchengetedza vatambi kutonhorera panhandare. Iyi polyester micro mesh jira rinonyanya kufema, pa ...
Yakakwira mhando yekufema 55gsm polyester mesh jira rekugadzira
Chigadzirwa Chigadzirwa Iyi polyester mesh machira, iyo chinhu nhamba HS2040, yakarukwa ne100% Polyester. Iyo ine yakavhurika yakarukwa ine yakajairwa pateni yemaburi kuitira kuti vatambi vatonhorere panhandare. Iyi polyester mesh machira inofema zvakanyanya, panguva imwechete, ndeye yakasimba yakasimba yakarukwa mambure machira. Iyi warp yakarukwa mesh jira yakanaka kune yunifomu yemitambo, juzi yemitambo uye lining nezvimwe, sezvo iri nyore, ine mhepo, uye inobata yayo ...
Dri inokodzera 100% polyester birdeye shiri ziso mesh jira remitambo
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi shiri yeziso mesh jira, iyo chinhu chinhu HS051, yakarukwa ne100% Polyester. Jira reBirdeye rudzi rwejira rinoshanda, rinozivikanwawo sejira rinobata ziya, rinoratidza kuti shiri yeziso mesh jira jira rinofema kwazvo. shiri ziso pajira riya jira rinoshandiswa zvakanyanya kugadzira mbatya dzemitambo, izvo zvinonyanya kukonzerwa nekufema uye ziya rekutora. Tinogona kuita rakasiyana basa rejira accor ...
Tsika 100% polyester yakarukwa shiri ziso mesh jira reanoshanda zvipfeko
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi shiri yeziso mesh jira, iyo chinhu chinhu HS007, yakarukwa ne100% Polyester. Jira reBirdeye rudzi rwejira rinoshanda, rinozivikanwawo sejira rinobata ziya, rinoratidza kuti shiri yeziso mesh jira jira rinofema kwazvo. shiri ziso pajira riya jira rinoshandiswa zvakanyanya kugadzira mbatya dzemitambo, izvo zvinonyanya kukonzerwa nekufema uye ziya rekutora. Tinogona kuita rakasiyana basa rejira accor ...
High yepamusoro polyester rinorema basa pajira riya mambure jira mucheche playpen
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi polyester mesh machira, yedu chinyorwa nhamba FTT10276, yakarukwa ne100% polyester, uye huremu i137gsm. Iri rinorema basa mesh jira rinofema zvakanyanya, panguva imwechete, ndeye yakasimba yakasimba yakarukwa mambure machira ane rakaoma ruoko kunzwa. Iyi yakarukwa yakarukwa mesh jira yakanaka kune mwana playpen, kutamba yadhi fence kana nzvimbo dzaunoda yakasimba, inofema mesh jira. Kuti usangane neyakaomarara ...
Heavyweight 100% polyester mesh machira ekutamba yadhi fence
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyi 100% polyester mesh machira, yedu chinyorwa nhamba FTT10281, yakarukwa ne100% polyester, uye huremu i227gsm. Iri rinorema basa poly mesh jira rinofema zvakanyanya, panguva imwechete, ndeye yakasimba yakasimba yakarukwa mambure jira neyakaoma ruoko kunzwa. Iyi yakarukwa yakarukwa mesh jira yakanaka kune mwana playpen, kutamba yadhi fence kana nzvimbo dzaunoda yakasimba, inofema mesh jira. Kuti tisangane t ...
Polyester micro mesh yakarukwa jira remitambo mbichana mesh lining jira
Tsananguro Iyi polyester micro mesh yakarukwa jira, iyo chinyorwa nhamba HS2039, yakarukwa ne 70 denier 100% polyester filament yarn. Iyo ine yakapfava ruoko-kunzwa uye yekufema chimiro icho chakaringana kupa iyo yakasununguka ganda kusangana. Iyi polyester mesh machira ine pateni yemaburi madiki ekuchengetedza machira kutonhorera, ayo akakodzera iwo madhirezi ezhizha uye lining yemitambo, mbatya dzekurovedza muviri, zvemitambo kupfeka, ...
Tsananguro Iyi polyester micro mesh machira, yedu chinyorwa nhamba FTT10033, yakarukwa ne75 denier polyester filament yarn. Iyo yakanaka kune ese maviri kumusoro uye pasi pemitambo yemitambo uye mbatya dzinoshanda mumitambo inosanganisira lacrosse, nhabvu, nhabvu, uye basketball Iyo ine yakavhurika kuruka ine yakajairwa pateni yemaburi madiki ekuchengetedza vatambi kutonhorera mumunda. Izvi polyester micro pajira riya jira iri zvikuru nemhepo, panguva sa ...
Tsananguro Iyi DTY polyester mesh lining jira, yedu chinyorwa nhamba FTT10262, ine yedhaimani mesh. Iyi fema inofema uye yakapfava. Panguva imwecheteyo, nekuda kwehunyanzvi hwehunhu hweDTY, ine yakatambanuka zvishoma. Tricot mesh lining jira rinoshandiswa sekupfekedza pasi peanopfeka zvipfeko uye bhachi. Micheka yemesh inofema uye inoshandiswa sezvo ichikwanisa kuchenesa ziya kubva mumuviri. Panguva imwe chete ...